War-bixin la xiriirta xaaladaha kala duwan iyo adeegyada bulsho ee degmada Xuddun ee gobolka Sool. – Radio Daljir
War-bixin la xiriirta xaaladaha kala duwan iyo adeegyada bulsho ee degmada Xuddun ee gobolka Sool.
Luulyo 26, 2011 12:00 b 0
Xuddun, July 26 – Qaar ka mid ah weriyaasha Radio Daljir ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay socdaallo la ku saabsan u kuurgalidda xaaladaha kala duwan ku soo sameeyey deegaanno badan oo ka tirsan gobolka Sool oo ay ka mid tahay degmada Xuddun iyo sidoo kale tuulooyinka Gorofley, God-aalo iyo Carooley oo dhammaantood ka tirsan gobolkaasi Sool, iyagoo soo qiimeeyey heer ay gaarsiisan yihiin adeegyada bulsho ee degmada Xaddun marka dhankasta laga fiiriyo.
Degmada Xuddun oo ka tirsan gobolka Sool waxay ka mid tahay degmooyinka sida weyn u fiday wixii ka dambeeyey burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya, waxana nolasha dadka ku dhaqan degmada Xuddun ay ku tiirsan tahay xoolaha nool oo si weyn ugu dhaqma deegaankasi, waxa intaasi u raaca gancsi yaryar oo ka jira degmada iyo qodaalka beeraha oo muddooyinkan dambe soo kordhayay maadaama dhulka ay ku taallo degmadu hodan kuyahay biyaha.
Xuddun waxay leedahay dugsi sare iyo mid hoose dhexe oo tirada ardayda dhigataana ay gaarayaan marka la isku daro illaa 700 oo arday, waxa kale oo jira dugsiyo waxbarasahada oo iyana lagu dhigto waxbarashada dadban kuwaasi oo dhan illaa 4 iskuul.
Dhanka caafimaadka degmada Xuddun malaha cisbitaal la jifiyo dadka bukaanka ah, waxaase ay leedahay xarun lagu daryeelo hooyada iyo dhalaanka oo leh shaybaar lagu baar xanuunada ay ka midka yihiin malariyada iyo xanuunnadsa kale inkastoo uu isaga laftigiisu u baahan yahay dayactir.
Biyaha ay cabbaan dadka degmada Xuddun ayaa ah kuwo aan ku wanaagsanayn cabbitaanka oo mararka qaarna sababa xanuunada ay ka midka yihiin Shuban-biyoodka iyo xundhurta ama Dysentria waxana ceelka-biyood magaaladu ku tiirsan tahay haatan hareereeyey ama dhaafay dhismayaal tira badan, taasi oo keeni karta in musqalaha la isticmaalaa ay u furmaan ceelka, maadama biyaha degmadaasi qodaal dhaw lagu gaaro.
Dhanka is-gaarsiinta waxaa degmada ka jira laba shirkadood oo dhanka Telefoonnada ah, waxaana ay kala yihin shirkadaha Telesom iyo Somtel, mana jiro adeega is-gaadhsiineed oo xagga Internetka ah.
Korontada magaalada u baxdaa ayaa ah mid kooban waxaana iska leh ganacsade u dhashay deegaanka oo ka mid ah qurba-joogta, waxaana la helaa adeegga korontada inta u dhaxaysa 5 galabnimo illaa 11 cawaysnimo.
Ma jiraan wax idaacado maxalli ah oo laga dhageysto degmada Xuddun, waxaana dadweynaha degmada weriyaasha Radio Daljir u soo gudbiyeen codsi la xiriira in Radio Daljir la gaarsiisyo degmada Xuddun si xogtooda ay u soo gudbiyaan, iyadoo deegaanno kale oo Radio Daljir booqatayna ay sidaasi si la mid ah u dalbadeen helidda Radio Daljir.
Sikastaba ka ahaatee inta badan deegaannadii kala duwanaa ee aan tagnay waxaa ka jiray xaaladahaasi iyo kuwo la mid ah marka laga hadlayo dhinaca hormarka.
R/wasaare Gaas oo dib u magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka iyo m/weyne Shariif oo aqbalay.